Ahoana ny fomba hanamboarana ny kaody error an'ny Disney Plus? - Ahoana No
Ahoana ny fomba hanamboarana ny kaody error an'ny Disney Plus?
Ny kaody Error 83 no be mpihaza indrindra eo anelanelan'ny ranomasin'ny hadisoana ataon'i Disney + amin'ireo mpampiasa.Tsy misy famandrihana tanteraka momba ny olana aterak'izany ary manampy izany fa tsy afaka miditra amin'ilay app mihitsy ianao rehefa miseho io hadisoana io dia mampiato anao tsara rehefa miditra amin'ny Disney + ianao.
Inona no mahatonga ny kaody Disney Plus Error 83 mampiseho:
Raha manontany ny helpdesk an'ny Disney + momba an'ity olana ity izahay dia manana fandrosoana tena mahitsy izy ireo valiny ho azy.Ny hany noresahin'izy ireo dia hoe amin'ny ankapobeny aolana momba ny fampifanarahana fitaovana, lesoka amin'ny fifandraisana, na olan'ny kaonty mihitsy. Izay voalaza manokana fa mipoitra io lesoka io dia tsy voalaza.
Fomba tsara indrindra hanamboarana ny kaody error an'ny Disney Plus:
Mijery ny Pejy Disney + helpdesk momba an'ity lesoka ity dia nitanisa fomba sasany haingana sy mora izahay hanamboarana ny kaody hadisoana ho tsara. Araho tsara ny torolalana nomena anao ary afaka fotoana fohy dia afaka mitsambikina ao anaty ranomasina atiny nomerika an'ny Disney + ianao.
Fomba 1: manamarina ny satan'ny mpizara Disney +
Imbetsaka, ny zava-mitranga dia tsy misy olana amin'ny faran'ny mpampiasa, ny vintana dia ny Server of Disney + mihitsy no midina, raha izany no izy dia ho zava-poana ny fanandramana fomba hafa rehetra.Raha hanamarina ny satan'ny mpizara dia azonao atao ny manindry Eto ary hasehony anao ny toerana misy anao mivantana.
FANAMARIHANA:Hamarino tsara fa misafidy ny firenenao amin'ny lafiny ankavanan'ny varavarankely ianao.
Tapaka ve ny Youtube? Hamarino ny toerana misy anao
Efa ambany ve izao Netflix? Hamarino ny toerana misy anao
Fomba 2: manamarina ny fifandraisana Internet
Raha vantany vao tafavoaka ny olan'ny mpizara isika dia afaka manohy ny dingana manaraka. Ity manaraka ity dia ny fanamarinana ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ny fitaovana andramana idiranao disney +.Ny fitaovana sasany dia manana endrika inbuilt hanamarinana ny hafainganan'ny Internet. Raha tsy manana endrika toa izany ny fitaovanao dia afaka mitsidika ianao fitsapana hafainganam-pandehan'i ookla amin'ny alàlan'ny Internet browser na azonao atao ny misintona nySpeedtestfampiharana avy amin'ny fivarotana fampiharana an'ny Device.
Fomba 3: manamarina ny mifanentana amin'ny fitaovana
Disney + dia hita amin'ny fitaovana maro fa TSY IZAO REHETRA. mila azonao antoka fa afaka mampiasa Disney + ny fitaovana ampiasainao. Raha hijery azy io dia azonao atao ny manindry Eto .
Fomba 4: manamarina ny fifandraisan'ny mpitety tranonkala
Raha vantany vao azonao antoka fa mifanentana ny fitaovana ampiasana ary na ny fifandraisana amin'ny Internet aza dia tsara. Ianao dia mila mahazo antoka fa ny navigateur ampiasainao dia mifanaraka ihany koa. Tsindrio fotsiny raha hijery azy io Eto .
Fomba 5: Famerenana amin'ny laoniny ny fitaovana
Satria efa ela ny fitaovana no mandeha dia mety hamorona fisie vetivety izay mety hisakana ny Disney + tsy handeha ara-dalàna. Ny fomba famerenana amin'ny laoniny dia tsy manome antoka ny hamahana ilay olana fa mora sy haingana dia haingana izy io, azo antoka fa mendrika hanandramana izany.
Fomba 6: manavao ny fampiharana Disney +
Raha efa lany andro ny fampiharana ampiasainao, dia mety hipoitra ny kaody 83 diso. Andramo havaozina ny fampiharana ary alefaso indray ny fampiharana.
Fomba 7: fametrahana indray ny fampiharana Disney +
Na dia eo amin'ny daty aza ny fampiharana ary azonao ny kaody fahadisoana 83, dia misy ny mety ho fisian'ny karazana rakitra maloto amin'ilay rindranasa ao amin'ny fitaovanao. Mba hamahana an'ity olana ity dia esory ny angona rehetra mifandraika amin'ilay fampiharana ary esory izany. Ampidino indray ilay rindranasa ary alefaso vaovao.
Fomba 8: havaozy ny rafitra fiasan'ny fitaovana
Tahaka ny ilàna fanavaozana ny rindranasa, ny rafitra fandidiana izay anaovana azy dia tokony hajanona hatrany hatrany. Ny OS efa lany andro dia mety hipoitra koa ny kaody fahadisoana 83. Hamarino raha azo atao ny manavao ny OS-nao ary manavao azy.
Fomba 9: Miezaha mampiasa kaonty Disney + hafa
Raha tsy mandeha ny dingana rehetra voalaza etsy ambony ary mbola mitohy ny olana dia andramo ny miditra amin'ny kaonty Disney + hafa mihitsy. Manoro an'ity dingana ity izahay satria mety hitranga ny kaonty ampiasainao. Eny, azo atao izany.
Fanontaniana napetraka matetika:
1Q. Ahoana no hahafantarana raha mifanaraka amin'ny Disney Plus ny fitaovako?
taona:Azonao atao ny manindry Eto hahazoana ny lisitr'ireo fitaovana mifanaraka aminy rehetra.
2Q. Ahoana raha toa ka tsy mandeha amin'ny kaody hadisoana Disney Plus ireo dingana voalaza rehetra ireo?
taona:Azonao atao ny mitsidika ny ivon-toerana fanampiana ofisialy hifandray amin'izy ireo mivantana Eto .
Ny maha-lesoka fahita azy matetika mitranga rehefa miditra amin'ny Disney + ianao, ny kaody fahadisoana faha-83 dia manana dingana tsotra amin'ny famahana olana. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana hamahan'izy ireo ilay olana, dia tranga tsy fahita firy fa tsy maintsy soloina ny kaonty.Manantena izahay fa nanampy anao hamaha ny olanao. Aza misalasala mizara ny eritreritrao ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ahoana ny fanafoanana ny kaonty Disney Plus?
VPN tsara indrindra ho an'ny Disney Plus (2020)
Fantatrao ve ny sarimihetsika Powerful Raging Fire?
afaka mahazo disney plus amin'ny roku ve ianao?
tranokala handrenesana mozika any am-pianarana
mp3 player converter youtube maimaim-poana
emulator fampiharana telefaona ho an'ny pc
Google fampiharana an-trano fampidinana mac
inona ny vlc ho an'ny mac